Raha toa moa ka ... zavamaneno misy tadiny. : comments » What if ...
Raha toa moa ka … zavamaneno misy tadiny.
Thursday, October 21, 2010 | 5 comments comments
Fanontaniana : milazà zava-maneno misy tadiny anankiray.
Valiny : Akoholahy mifatotra.
(Illustration : Cosio Galko’s sunburst guitar collection, licensed cc-by 3.0)
Thursday, October 21, 2010 - 07:38:40
Ny tsy fantatro dia hoe fanadinana am-bava ve ilay tranga sa fanadinana an-tsoratra, fa raha fanadinana an-tsoratra ilay izy dia misy mahasamihafa azy tokoa ny voambolana hoe “zava-maneno” sy ny hoe “zavamaneno”. Raha adika amin’ny teny frantsay izay mora hahazoan’ny Malagasy kokoa ny hevi-teny, ny hoe zava-maneno, misy tsipi-panohizana dia hoe “Une chose qui émet un son”, ary ny zavamaneno, tsy misy tsipi-panohizana kosa dia hoe “instrument de musique”.
Tadidio tsara ary rehefa manoratra hoe tendrombohitra, lokomena, fandriampahalemana, fotodrafitrasa, solosaina, solomaso, Benitanàna mba hatao teny tokana mitambatra tsy misy tsipi-panohizana fa tsy sanatria hosoratana hoe tendrom-bohitra, loko-mena, fandriam-pahalemana, foto-drafitr’asa, solo-saina na solon-tsaina, solo-maso na solo maso, Ben’ny Tanàna.
Thursday, October 21, 2010 - 09:27:13
mibizna gitara gah dotMG?mdr!!!
Thursday, October 21, 2010 - 20:44:47
wow, u’re on fire…
Friday, October 22, 2010 - 07:03:40
bloc25> Billets 4 izao dia miezaka manisy fanavaozana kely eo amin’ny resaka avoaka, ka mba asiana sary na vidéo illustration kely isak’izay lahatsoratra atolotra. Na sary nalaiko na sary hita eto amin’ny internet fa azo ampisaina maimaim-poana (licence libre). Tamin’ity indray mitoraka ity tsy nahita sarina akoho mifatotra amin’ny mahazaka dia ireo sarina gitara ireo aloha no nampiasaina. Ratsy angaha ilay izy?
simp> miha-mateti-piavy fa ohatry ny lasa fohy + kely koa a …
Friday, October 22, 2010 - 08:45:50
mahita ny sarin’ilay akoholahy mifatotra mitabataba alainao ain’ny fakantsarinao na video an’ilay izy izany zao no mety tena milay, otrany sary hamarotra gitara izany io dia mampiseho marchandise , izay aloha ny fahitako azy eh!
Raha toa moa ka ... hitako ny blaogin'i za »
« Raha toa moa ka ... tsy mety amiko ilay fanovàna ny lalàmpanorenana.
Ilay fanomezana "surprise"
Raha toa moa ka ... Tsy M (2)